IBSA EJJENNOO MISEENSOTA ABO KUTAA KANAADAA « QEERROO
IBSA EJJENNOO MISEENSOTA ABO KUTAA KANAADAA
April 19, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Korri Miseensota ABO Kutaa Kanaadaa Ebla 14-16/2017 Magaalaa Toroontootti geggeeffamaa ture milkiin xumuurame. Korri kun Akkuma aadaa Oromootti Eebba Maanguddoon baname, Faaruun Alaabaa akkasumas yaaddannoo gootootaan jelqabame. Itti aansuun D/T Konyaa Mul`is A/Gadaa J/Hundee Eebbaa Miseentotaan baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhe booda J/ Fiqaaduu Eebbaa D/T Kutaa Kanaadaa haala Sagantaa koraa ibsan.
J/Odaa Xasee MSG fi I/G Birkii Jaarmiyaa fi Siyaasaa ABO-BA, miseensotni Adda Bilisummaa Oromoo Kutaa Kanaadaa keessa jiran hundi amanna dheeraa fi karaa fagoo deemuun Kora kana irratti argamii fi Konyaa Kora kana qopheesse galateeffachuun Kora sirnaan banan.
Kora kana irratti hoggannootni dhaabaa J/Ibsaa Nagawo MKHR ABOfi J/Morkataa Guutuu MGS ABO irratti argamaniiru.
Korri kuniis Ebla 15 Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo haala howwaa fi sirna miidhagaan Hawaasa Oromoo Magaalaa Toroontoo waliin kabajate jira. Walgahii hawaasaa kanarrattis J/Odaa Xasee haala QBO amma irra ga`ee fi walumaa galatti haala idila Addunyaa laalchisee ibsa bal’aa kennanii jiru.
Ebla 16 Wal ga`ii itti fufuun haala QBO, dhimma jaarmiyaa, haala WBO, Dhimma qabsoo FXG biyya keessatti deemaa jiruu fi haala QBO fuula duratti jabeessuu fi cimsuu qabnu irratti marihachuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafne.
Nuti Miseensotni ABO Kutaa Kanaadaa ibsa ejjennoo armaan gadii baafachuun wal ga`ii keenya milkii fi injifannoon xumuurannee jirra.
Nuti Miseensotni ABO Kutaa kanaadaa wal ga`ii keenya irratti hamilee guutuun qooda fudhachuun QBO haala hundaan jabeessuu fi cimsuuf Irbuu keenya haaromsina.
Dhaaba keenya ABO fi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) waan hundeenyeen utubuu fi tinisa barbaachisu hunda ni goona!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo falmaa QBO fi mirga abbaa biyyummaa ummata keessaniif argamsiisuuf falmaa itti jirtan dinqisiifachaa, guutummaan hawaasa Oromoo hundi bakka jirtanitti QBO gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf, falmaa deemaa jiru kana bira akka dhaabbatan waamicha lammummaa isiniif dabarsina.
Qabsoon FXG hanga gaaffiin ummata Oromoo deebii argatuu fi Mirgi hiree Murteeffannaa ummata Oromoo kabajamutti cimee itti fufuu qaba! Mirga keenya kabchiifachuu fi Bilisummaa keenya gonfachuuf wareegama Qabsoon nu gaafattu kamuu ni baafna.
Maqaa Mootummaa Naannoo 5nii ykn Liyyuu Poolisii jedhuu golgatee ajjeechaa fi saamicha Waraannii Wayyaanee ummata Keenya irratti gara jabinaan raawwachaa jiru ni balaaleeffanna! Weerarri ummata keenya irratti geggeeffamaa jiru atattamaan akka dhaabbatu.
Ummata keenya Daangaa Oromiyaa kabachiisuu fi Weerara mootummaan gooleesituu Wayyaaneen duula nutti banamee jiru, ofirraa qolachuu fi ittisuuf wareegama lubbuu fi qabeenyaa baasaa jiran seenaa gootummaa Ol aanaa fi kabjaa guddaa qabdu! Gumaan keessaniis qabsoon akka baatu shakkiin hin jiru janna.
Murtiilee wal ga`ii GS-ABO irratti haala dhaabaa fi jaarmiyaa ABO xiinxaluun murtiilee dabarse guututti ni deggarra. Hojiitti fassaruufis ga`ee fi qooda miseensummaa keenyaa ni baana.
WBO dirree qabsoo fi golee Oromiyaa hundatti diinaa waliin falmaa geggeessaa jiru dinqisiifachaa, Kufaatii diinaa shaffisiisuuf sochii keessan dachaa akka gootan dhaammanna.
Mootummaan wayyaanee labsii Atattamaa ykn qoqqobbii fi uggurraa ummata Oromoo fi Oromiyaa irra kaayee jiru ni balaalleefanna. Labsiin kun kan Ummata Oromoo seera Addunyaan alatti shanyii duguuggii irrtti raawwachuuf tilmaamame qofa osoo hin tahiin kan mirga Oromoon akka ummatatti qabu guutumatti sarbu tahuu isaa hubachiifna.
Haalli amma keessa jiruu fi dhimmi QBO haalaan murteessaa dha. Kanaaf , tokkummaa keessan jabeessuun Diina Biyya Abbaa keenyaa humna Qawween qabatee nu ajjeessaa fi qabeenya keenya saamaa jiru kana ofirraa kaasuun Bilisummaa keenya gonfannee Biyya keenya irraatti Abbaa biyyaa akka taanuuf ummata Oromoo biya keessaa fi biyya alaa jiru maaraf waan dandeessan maraan QBO bira akka dhaabbattan waamicha lammummaa isiniif dabarsina.
ABO, WBO fi Qeerroon Biisummaa Oromoo, bu`aa ba`ii Qabsoo fi hadhaa qabsoon qabdu hunda qabsoon irra aanuun Sirna cunqursaa fi mootummaa abbaa irree kana hundeen buqqisuuf Injifannoon irra aanuun xumura itti goonu shakkii hin qabnu.
Dhaabbilee Siyaasaa Oromoo kan biyya keessaa fi alaa jirtan hundi haala ummatni keenyaa fi biyyi keenya Oromiyaan keessa jiru ilaalcha keessa galchuun waan dandaysan hundaan diinarratti akka xiiyyeefattan dhaammanna. Tokkummaa qabsoo fi jaarmiyaa cimsuun Biyya tokko Oromiyaa! Saba Tokko Oromoo! Galiin keenya Bilisummaa! ta`uu hubachuun jabinaan Qabsoo diina kenya irratti waliin haa xiyyeeffannu.
Farreen QBO, ABO fi WBO irratti ololaa geggeessaa jirtan irraa akka dhabbattan akeekkachisaa, ololli keessan gochaa diinni ummata keenya irratti raawwachaa jiruun addatti waan hin laalamneef daran nu jabeessa malee akka nu hin laafiifnees isin beeysifna.
Ilmaan Oromoo kan haala addaa addaan diinaaf hojjetaa jirtan, dandeetii, human keessanii fi Meeshaa waraanaa hidhattanii jirtan, diinatti galalgalchuun Ummta keessanii fi biyya keessaaniif seenaa gootummaa akka hojjettan dhaamsa lammummaa fi Oromummaa isiniif dabarsina.
Saboota Cunqurfamoo fi saboota Bicuu Oromiyaa keessa jirtan maraaf, Mootummaa gabroomfataa fi humna waraanaa fi Qawweetti amanu kana ofirraa kaasuun nagaa waara argamsiisuuf akka waliin qabsoofnu waamicha qabsoo dabarsina.
Mootummootni Addunyaa Mootummaan wayyaanee TPLF/EPRDF Farra Diimokiraasii fi farra nagaa tahuu beeytani gargaarsa bifa kamuu irra dhaabdani, Nagaan sabatinsaa fi tasgabbiin akka bu`uuf dhiibaa akka irratti gootan gaafanna.
Mootummootni oollaa Oromiyaa fi sabootni ollaa Oromiyaa jiraattan, Ummatni Oromoo biyya isaanii keessatti nagaan jiraachuu dadhabanii biyyaa bahuun baqatummaan isin keessa jiraatan hundaaf mirga baqatummaa isaanii kabajjanii, tajaajila Seerri Addunyaa gaafatu gootanii fi gargaartan kabajaan gaafanna.
Ajjeechaa, hidhaa, ukkaamsaa fi saaminsa qabeenya ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru, Qaamni Mirga dhala namaaf falmitan hundi gochaalee sukkaneessaa fi shanyi duguuggi Ummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kana akka dhabbatu gaafachaa, Ajajjootni waraana Wayyaanee fi qaamni Tikkaa yakka kana hojjetaa jiran saaxiltanii kanneen gochaa kanaaf itti gaafataman Seera Addunyaaf akka dhihaataniif dhiibbaa akka irratti gootan isin gaafanna.
Miseensota ABO Kutaa Kanaadaa.
« Guyyaa Gootota Oromoo magaalota Godina Arsii Saddiiqa,Nageelle,Diksiis Hamdaa keessatti Qeerrodhan kabajame
Dhaamsa Itti Fufinsa Ebla 15 Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoofi Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Ilaalchisuun Hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. »